Kedu ụdị ngwá ahịa Amazon kasị mma n'afọ a?
Ihe ịga nke ọma n'ogologo oge a na-eme ka ịchọọ ịmalite ịsọ mpi ga-achọ ka i nwee usoro na njikwa zuru oke maka ihe ndị dị mkpa nke ngwaahịa gị na-edepụta arụmọrụ dịka ntụrụndụ, mgbasa ozi, nzaghachi, ọnụahịa, ịkwụ ụgwọ, nchịkọta ederede, wdg. Ma ebe a bụ ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị kacha mma Amazon na-ere ahịa maka ụmụ gị ọ bụghị naanị iji mee ka ihe dịkwuo mfe ma nweta nnukwu uru karịa ndị ahịa gị kacha nso. Ngwa ndị na-esonụ na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ndị kachasị arụ ọrụ. Ekpebiri m idepụta ha site na ebe ha nwere ike ime ihe. Ekwenyere m na ndị enyemaka a ga-ahụ maka ntanetị ga-enwe maka onye ọ bụla na-ere ahịa nnukwu oge ọ bụla n'ebe ahụ.
10 Best Amazon Sale Ngwaahịa Ugbu a
Ahịa bụ isi ihe na gị asọmpi, na taa taa agbanwe ụwa na ọ ghaghị ịchọta nsonaazụ ya na nlekota oru ya. Ekwadoro m iji RepricerExpress, n'ihi na ọ bụ n'ezie n'etiti ndị kasị ere ahịa Amazon, ma ọ dịkarịa ala mgbe ọ bịara ịsọ mpi. Site na ngwaọrụ a, ị nwere ike ịkpụzi ma gbanwee usoro ịme ọnụahịa gị ugbu a na ogologo oge. Ị nwekwara ike irite uru site na ụfọdụ iwu egwuregwu dị iche iche, setịpụ ihe dị elu na ọnụ ala, na-eme ka akụkụ ala gị tụrụ anya n'otu oge ahụ. RepricerExpress nwekwara ike ịchekwa gị oge dị ukwuu, n'ihi nnukwu mbubata na nyocha dị omimi, yana yana ndebiri bara uru dị maka itinye mgbanwe ọ bụla na nkwụnye ego gị ugbu a ozugbo.
Nhọrọ ọzọ n'ime ngwaahịa kachasị mma Amazon maka nlekota ọnụ ahịa ma na-achịkwa ahịa gị n'ọtụtụ, CamelCamelCamel nwere ike ile anya ntakịrị na akpa ele. Ma n'ezie ọ na-arụ ọrụ! Gbanwee mmezi ọnụego niile n'ime usoro dị mma na nke zuru oke na oge nlele, nlele, na mmelite - na ngwa ngwa nchọgharị Chrome nke dị n'okpuru aha Camelizer ga-eme ka ihe dị mfe karị.
Nkwurịta okwu na nyochaa
Nzaghachi na afọ ojuju nke ndị ahịa abụwo akụkụ dị mkpa nke ecommerce ihe ịga nke ọma, ma ugbu a, enwere nyocha site na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa obi ụtọ ga-agụ maka ọnụọgụ ọnụ na Amazon. Ọ pụtara na enweghị afọ ojuju ndị ahịa nwere ike ọ bụghị naanị ime ka ihe dị njọ maka azụmahịa mbupu gị ma ọ nwere ike ime ka ndepụta ngwaahịa gị dị elu karịa ndepụta nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere ike ịhụ. Na ebe a bụ mgbe Nzaghachi Return na-abata. N'ihe banyere njikwa nkwurịta okwu na akpaaka, ọ bụ n'ezie otu n'ime ngwaahịa kachasị ahịa Amazon. Ọ ga - eme ka ị ghara ịmụrụ anya na nyocha ọ bụla ndị ahịa na - adịghị mma ka i wee nwee ike iwelata ihe ọ bụla nwere ike ịme ka ị ghara ime ma nyere gị aka mgbe ọ na - abịa izipu ndị na - ere ahịa gị n'oge na -
Ụgha ego na-agbaso mgbe niile na-agba ọsọ azụmaahịa, karịsịa nke obere na ikike ruru ala. Ihe ndi oru ecommerce kwadoro bu ihe ndi ozo..Inye ego nye ndi ahia ahia online Kabbage bu ezigbo nzoputa iji nweta nnukwu onodu ahia. Ntọala a na-enyocha ọrụ ahịa nke onye na-ere ahịa nke na-emetụta maka enyemaka iji nyochaa data a gafee dịgasị iche iche ahịa ma e wezụga nke Amazon na trading platforms na-enye nanị ngwọta ego a kwadebere nke ọma nke na-egbo mkpa nke ụlọ ọrụ mbupu na azụmahịa.
Akụrụngwa a nwere ike inye aka mee ka ọ dị mfe nbudata iwu ndị ahịa ozugbo site na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na igosi ha na ụzọ mmekọrịta dị mma. Ụgbọ mmiri bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị mma Amazon ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ọnụahịa, nhazi atụmatụ, mkpọsa mgbasa ozi email, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ị nwere ike ịchọta dị ukwuu iji nweta ihe niile n'ọnọdụ ọ bụla ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọtụtụ ọrụ ecommerce dị iche iche, Ụlọ egoDirect bụ MUST maka azụmahịa gị n'ịntanetị, n'ezie, ọ bụrụ na ịgaghị achọ chefuo ihe obosara obula na ichota otutu akwukwo ego. Ị maghị otú ọnụ ọgụgụ ahụ si bụrụ kpọmkwem, ma dị ka atụmatụ a maara na nso nso a, ngwá ọrụ nkwụnye ego a nwere ike ịchekwa ihe dịka pasent 3 nke ihe ntanetị gị - naanị na-eme nanị mmezi ziri ezi na ọnụego mgbanwe na ịchekwa ego kwa ụbọchị.
M nwere ike ịhọrọ ịhọrọ n'etiti Ndị ahịa na Okwu Ngwá Ọrụ nke Google dịka ha bụ ngwaahịa kachasị mma nke Amazon na-eme ka ụzọ nke azụmahịa na-aga nke ọma. Nyere gị aka na njirimara nchịkọta ngwaahịa, Onye ahịa Okwu Okwu mkpokọta na-ekpuchi 20 nde nke okwu mkparịta ụka kachasị elu na Amazon maka ịzụ ahịa kwa ụbọchị. N'iji Ngwuputa Ngwuputa site n'inwe ihe omimi nke uwa, o gosiputara ya kachasi ike karia ogugu okwu nke kachasiri nma maka utu aha na ihe omuma.
Na-achọ ngwaahịa ọhụrụ na ire ere na ịgagharị ahịa ahịa ọhụrụ bụ akụkụ nke ọ bụla na-ere ahịa n'Ịntanet. Ma ọ bụrụ na ị na-eche enweghị nghọta na atụmanya ohere ịzụ ahịa na Amazon, Egwuregwu Ngwá Ọrụ nwere ike inyere gị aka site na ntinye uche zuru oke ma gosipụta gị ndepụta nke ebe kachasị mma maka ebe ị na-ere ngwaahịa.
N'ezie, o nwere ike iyi ihe na-enweghị isi, ma iji usoro mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu dịka Facebook bụ ụzọ dị ukwuu isi na-ebufekwu okporo ụzọ na ndepụta ngwaahịa gị. akwụ penny. Ihe niile ị chọrọ bụ itinye ego oge iji mepụta profaịlụ metụtara azụmahịa. N'ụzọ dị otú a, ozugbo i kere akwụkwọ azụmahịa gị, jiri mgbasa ozi kwalite ngwaahịa gị ma bụrụ mgbe niile n'elu nyocha ọchụchọ. Kedu ihe ọzọ - ịmepụta ike siri ike na mgbasa ozi ọha na eze na ịmepụta ozi na ịmekọrịta kwa ụbọchị, ị nwere ike ịza ndị na-ege ahịa nwere ike ịchọta ya.
Onye nkwụnyeghachi nchịkwa bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị mma Amazon ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị ahịa na-emezighị emezi ma ọ bụ na-atụghị anya ya, n'ihi ihe atụ, ma ọ bụ ụdị ego ọ bụla , dịka ụgwọ ọrụ, nha, na ụgwọ ụgwọ, yana ihe ọ bụla mebiri ma ọ bụ nsogbu ndị na-eme n'ụzọ. Jiri nkwụnyeghachi nchịkwa iji mee ihe ọ bụla na-eme na egwu ma chefuo nsogbu ndị ọzọ na nkwụghachi ụgwọ ozugbo Source .